Welcome to Aayaha Nolosha » RUBAC QARNI KADIB AYEY HESHAY JACEYLKEEDII AY ILOOBI WEYDEY. (QAYBTII 4AAD).
RUBAC QARNI KADIB AYEY HESHAY JACEYLKEEDII AY ILOOBI WEYDEY. (QAYBTII 4AAD).
Inkatoo uu Maalmahan dambe Ka bixi waayey Fikir Xambaarsan Walaac iyo Cabsi Hareysay Naftiisa oo uu keenay Jaceylka ku Sii fidaya, hadana waxa uu Caado ka dhigtey xusuus kala duwan oo macaan badan iyo riyo Sariirta ku sugta.
Habeeno badan waxa uu arkayey Suleekha oo wiil u dhashay iyo isaga oo la leeyahay. ” Waa Aabihii oo halkan taagan…alla u Ekaa Suldaan isagaa isdhaley..!!” iyo isaga oo magac qurux badan u bixiyey, riyada noocan ah waxa ay noqotey mid ku soo noqnoqota.
Suldaan waxa uusan marnaba iloobeyn Wanaaga Suleekha iyo Dabeecad Wanaageedii. Waxa ay ahayd qof ay dhif tahay in nooceeda laga helo dumarka, qof uu illaahay u dhameeyey Qurux Dumar, midabkeedu ma ahayn madow, mana Cadeyn, waa qof dhiig furan.
Waa shaqsi uu rabi ku maneystey dabeecad wanaag, mar walba farxaan ah oo dhoola cadeynaysa, sheeko badan oo qof bartey uusan ka xiiso dhaceyn. Waxa aan dhihi karaa waa nooca Dumar ee laga bixin jirey boqolka halaad iyo baarqabkooda waxaana intaa u sii dheeraa waxa ay ahayd qof wax baratey oo aqoonyahanad ah, waxa ay dhameysey Dugsiga sare ayada oo ka soo baxdey Dugsigii Sare ee Cismaan Geedi Raage oo ku yaaley Xaafada Hawl- Wadaag ee Magaalada Muqdisho.
Suldaan isagu wax walba oo dhaca qalbigiisa ma ayna ka bixi karin, waxaa ku sii kordhayey Kalgacalka iyo Muxubada uu u hayey oo maalinba maalinta ka danbeysa ka sii dareysay.
Caashaq baaxad weyn ayaa ku sii fidayey, Cishqi aan dhamaan ayaa ku sii durkayey, iyada oo Xubi aan yareyn uu ku hagoogtey dhamaan unugyada Jacaylka ee jirkiisa gaar ahaan kuwa dhiiga raaca.
Maalin walba Cajalad xasuus oo la xiriirta wanaageedii ayuu daarta, dabeecadeedii Fiicnayd, quruxdeedii indho qabatinka lahayd, iyo haybadii Dumarnimo ee illaahay u abuurey ayuu naftiisa ku sasabaa, oo uu ku dajiyaa mar walba oo uu la soo darso walaac Caashaq oo uu keenayo rabitaanka cishqiga xawliga sare ugu sii fidaya, dhamaan dareemayaasha Oogadiisa iyo kuwa u qaabilsan jirka Dareenka Macaan ee Jaceylka.
Xusuusta ka badatey darteed ayaa maskaxdiisu soo gudbineysey Muuqaal kasta oo wanaagsan kaas oo indhihiisu mar un qabteen. Xataa waxa uu arkayey markii ay yayaraayeen, xiliyadii waxbarashada iyo aragti walba oo maskaxdu sawirtey xiliyada qaar.
Waxaa ka mid ahaa markii ay ardayada ahayd ee ay ku labisan jirtey dharka Iskuulka, Sarwaalkii kaakiga ahaa ee buuxiyey jirkeeda quruxdeediina banaanka keenay markii uu buuxiyey Jirkeedii dhisnaa, iyo Simaha soo jiidashada ku abuurey.
Dhib badanaa Jaceylka marka ay kaa fogtahay nafta aad Jamatey, walaac iyo kurbo badanaa haddii ayna indhahaagu qabaneyn lamaanahaagii aad dunida ka dooratey…illeen fikir iyo Cabasho wax kuuma qabato ee Ciil badanaa marka Jaceylkaagu Shaki galo…walwal iyo kurbo joogta ah Soo ma aha Xaaskaagii oo uur leh oo aadan xiriir kalgacal iyo Sheeko Jaceyl marnaba la yeelaneyn.. Xumaa dadka kala dhex gala lamaanayaasha.
Cadowsanaa kuwa kala fogeynaya dad guur xalaal ah isku qaba, daranaa kuwa caadada u leh kala geynta macaashaqiinta dookhoodu israacey ee guur xalaal ah Wadaagey…..soo ma dhihi karno Cadowga Jaceylku waa Cadowga dadka dhan leeyihiin… Ma wax wanaagsan baa dadka ku dadaalaya in ay kala furaan lamaane guur xalaal ah Wadaagey, mucaashaqiin isku kalsoona gurigooda duminaya?!!.
Macaanka Jaceylku waa marka aad ku guuleysato Sida Suldaan iyo Suleekha oo kale, haddana Cadow ayaa hareereeyey oo raba in ay isu kharaareeyaan balse kuma ay guuleysan.. Suleekha waa qof aad u naxariis badan, mana jecla in ruux illaahay abuurtey la dhibaateeyo, sidaa darteed ayaana loogu guuleysan waayey in laga furo Suldaan.
Waxaana intaa weheliya in ay tahay qof wax baratey oo aan laga aqli badin waayey. Suldaan isaga maba laga furi karo, waayo waxa uu ku dhaartey in uusan fureyn, Suleekha oo uu adduunka ugu Jacelyahay, mar ayey ka soo fakatey kalmad ah . “”waan ku furi haddii ay dhibaatadaada xal u noqon'” Iyana wuu ka shalaayey isaga oo go,aansadey in uusan fureyn inta uu noolyahay.
Si kasatba ha ahaato ee Jaceylka Suleekha iyo Suldaan ayaa maraya meel aan wax loo dhimi karin….iskuday kasta oo la sameeyana aan lagu guuleysan karin.